Udliwanondlebe noMxholo emva kwesizathu sokuba usoloko u-Lyin Vidiyo - Umculo
Udliwanondlebe noMxholo emva kwesizathu sokuba usoloko u-Lyin Vidiyo
UNicholas Fraser ungumfundi wekholeji oneminyaka engama-21 ubudala ohlala eQueens, NY nakwasekuqaleni kwale nyanga, wenza uMdiliya onako , ngokunokwenzeka, ibe yiNgoma yehlobo. Kwi-ode kumaxoki, uFraser-okwiVine kunye ne-Instagram phantsi kwegama lomsebenzisi @ zenzek3fraser -Flips amazwi eengoma ukuya Okulandelayo kukudlalwa kweklasikhi, 'Kusondele kakhulu.'
UFraser wajoyina uMdiliya malunga neminyaka emibini edlulileyo kwaye waqala ukukhupha iividiyo ezafumana ukubambeka nangona ezinye zaye zangena kwintsholongwane zingafakwanga.Enkosi kwezinye iidiliya kwakhona kunyeukukhwaza, oku kulandelayo kubhalile ukusuka kumakhulu ambalwa ukuya kuma-55.8K kwiVini kunye ne-37.1K kwiI-Instagram. Emva kwevidiyo yakhe ethi 'Kutheni Uxoka' yangena kwintsholongwane, sathetha naye malunga nokwenza uMdiliya, kutheni enendlu yangasese eyadini yakhe, nokuba yinkwenkwezi yentsholongwane.
Wonke umntu kudala esithi unayo Ingoma yehlobo.
Xa ndisiva oko, kuyageza. Ndahamba ngaphandle kwendlu yam kunye nabahlobo bomntakwethu beza kum kwaye babefana, 'Uyazi ukuba udumile ngoku?' Ndifana, 'Intoni!'
Uyenza njani gummies ngaphandle kwegelatin engathandekiyo
Yonke into ukusuka kwimpahla ukuya kuhlelo yenziwe kakuhle. Iqale njani lento?
Bekusebusuku kakhulu kwaye bendiza kubona intombazana ethile, akunjalo? Kodwa ngaphambi kokuba ndibone le ntombazana, bendizakuya ku-7/11 ndiyokuthenga idonathi kwaye andiziva ngathi ndihamba ndaye ndagqiba kwelokuba ndithathe imoto kamama ngelixa elele. Ndithathe imoto ndadibanisa umnxeba wam nemoto ukudlala umculo. Ingoma yoqobo-elandelayo 'isondele kakhulu' -iqale ukudlala kwiPandora. Ndimamele irediyo kaRK Kelly okanye enye into. Ndandiwazi onke amagama ke ngoko ndayikhupha kuYouTube ukuyidlala kwasekuqaleni kwaye ndandiqala nje ukutshintsha amazwi athi 'Kutheni usoloko uxoka.' Kwaye bendithanda, 'O.' Ndihlala nditshintsha iingoma kodwa ngeli xesha bendithanda, 'Kuyaphambana oku.' Ndinayo enye ividiyo apho ndatshintsha amazwi emculo kuRae Sremmurd's 'No Type' to 'Passion of Christ.' Ukutshintsha amazwi kuye kwalandela wonke umntu emhlabeni. Ndaqala ukuyicula ndaphinda ndathi, 'Ndiza kubabulala ngomso.'
Kwangelo xesha, uxoka kuba webe imoto kamama wakho ukuze uyokufumana idonathi. Ngaba ugqibile ukudibana nentombazana?
Wonke umntu uyazi ukuba umntu ohleli elele kwinto yakhe
Ividiyo ethunyelwe nguNicK (@ downgoes.fraser) nge-Aug 28, 2015 nge-5: 22 pm PDT
Uyithi nkxu uyokucwangcisa umdiliya?
Ngokuchanekileyo. Ngosuku olulandelayo lwafika kwaye ndarekhoda ilizwi lokufaka kwi-audio. Umbono wokuqala yayingengowokuba ndibengaphandle, umbono wokuqala yayikukuba ndibonise ubuso bam ngengoma edlala ngasemva kodwa ndathi, 'Ayonelanga. Andifuni ukwenza ividiyo nje, ndifuna ukwenza ividiyo yeR & amp; B. ' Ingoma edumileyo. Ndicele umntakwethu eze ezantsi andifowunele ngaphandle.
Ukusuka kwizambatho ukuya kumdaniso wokuhamba, uyicwangcise ngokugqibeleleyo le nto.
Yindlela endihlala ndihlala ngalo lonke ixesha. Indlela ebendidanisa ngayo, ndiyenza ngalo lonke ixesha. Kuyamangalisa. Inxalenye yengoma apho ndithi, 'Mmmmmmmohmygod' kudala ndiyithetha loo nto.
Ke, ngalo lonke ixesha usithi 'Owu Thixo wam' utsho njalo?
Ewe. Kuyamangalisa. Kuphuma nje kwaye kuyangxola kwaye kuhlala kunjalo.
Kwenzeka ntoni emva koko?
Ndenze le vidiyo kwaye ndahlala phantsi ndacinga ngaphakathi, 'Ngaba kufuneka ndibeke igama lam kule vidiyo?' Ndicinge ukuba izakufumana ukuthanda okungu-100, kwaye ziphi izinto eziyi-100 ezithandwayo kule mihla? Kufanelekile ukuba, ithini, iibuns ezimbini zenja ezishushu? Akufanelekanga nantoni na. Ndithathe ithuba kwaye andibekanga gama lam. Abafana endibaziyo ngeVine bandixelele ukuba ndidibanise yonke imithombo yeendaba zentlalo kwiVine ngelo xesha, ndiyithumela kuyo yonke indawo-iVine, i-Instagram, iTwitter, neFacebook. Ndalala ndavuka, ndandifana, 'Kulungile kwenzekani ngoku?'
Ndimele ndibuze, kutheni unendlu yangasese emva kweyadi yakho?
Uyazi, imibuzo ethile awukwazi ukuyiphendula kuba akukho mpendulo. Ngokusisiseko, ndiyilungisile indlu yam-igumbi lam lokuhlambela-kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwaye indlu yangasese endala yakhutshelwa ngaphandle kwaye, ngasizathu sithile, asizange siyikhuphe. Bekulapho lonke ixesha. Ndacinga nje, 'Oku kungongeza nje kwividiyo.' Wonke umntu uhlala endibuza ngale nto.
Ngubani ofikelele kuwe? Ndabona uDiddy, uChris Brown, uWiz Khalifawere bonke bethumela ngayo.
Bathumele malunga nayo ekuqaleni kodwa khange bandiphawule. Ndixelele abalandeli bam ukuba baxelele ukuba bandiphawule. Uninzi lwabo ekugqibeleni bandimakile kuyo.
Zeziphi ezinye zeemashup zakho ozithandayo?
Oh Thixo wam. Kukho enye apho basusa khona intloko yam kwaye bayilungiselela ividiyo elandelayo yomculo. Isenokuba yenye yezona zibalaseleyo.
Ngaba ukhona umntu oLandelayo ofikelele kuwe?
Ewe omnye uphawule ngale vidiyo indothusileyo, bendicinga ukuba bazakukhathazeka kodwa bandibulele. Ndinqwenela ukuba ndibenezimvo endizokubonisa zona, yayixabisekile.
Ngaba ucinga ukuba uza kuyenza kwakhona ingoma yonke?
Ngokunyaniseka, indlela ebekwe ngayo ingqondo yam, andifuni ukwazi njenge 'Kutheni u-lyin' mfo kuba ndihlekisa kunale vidiyo. Ndifuna nje le vidiyo yazisa abantu ukuba ndiyile kwaye ndicinga ukuba ukwenza ingoma kunokuba kubi okanye kulungile. Inokundenza okanye indonakalise ngokupheleleyo ... umsebenzi wam okanye nantoni na endiyenzayo.
Ufuna ukwenza ntoni?
Ndacinga ngokuba ngumhlekisi kodwa andazi ukuba ndiyafuna na. Ndiyinto ehlekisayo. Ndinemibono elungileyo ke ngoko ndicinga ukuba mhlawumbi ndingaba ngumboniso womntu othile okanye ndibonise eyam inkqubo. Ndingaba kwi IMadea imuvi. Awunokwazi! Ubomi bam buhle kakhulu.
Kwenzeka ntoni ngentombazana owaya kubona ubusuku owawucinga ngoMdiliya?
Andazi ukuba ndingabuchaza njani obo buhlobo. Wayefana, 'Ndiyaziqhenya ngawe, ekugqibeleni ufike apho ufuna ukuba khona.' [ Ihleka ]
Ngaba ikhona enye into ofuna ukuyongeza?
Into endifuna ukuyithetha kukuba ndibulele wonke umntu. Kwiintsuku ezintlanu ezidlulileyo, ndandingumfana owenza iividiyo ezihlekisayo ezazifumana ukuthanda okungama-30. Ngoku, yonke into ifumana ukuthandwa ngakumbi. Ndiyabulela wonke umntu kwaye andifuni ukuba yiloo ndoda, ndifuna ukuthetha nabantu ndibazise abantu ukuba ndingubani. Ndifuna abantu bajonge kum kwaye ndicinga ukuba ndibeka umsebenzi owoneleyo kule nto ndiyenzayo, ndingafumana ndawo ngayo.
I-Red Dead Redemption 2 Ukutsala kwi-725 yezigidi zeedola kwiRekhodi yokuPhula iVeki
U-Katt Williams ubanga uCedric UMonwabisi wagweba elinye lamahlaya akhe: Uza kuphulukana nezinyo okanye ezimbini
UCharlie Sheen uxele ukuba uchithe i-1.6 yezigidi zeedola kubasebenzi bezesondo emva kokuchongwa njenge-HIV
Umbutho woBusuku bobusuku uChithelwe ukuba uyoyika ukuQalisa kwakhona okuMnyama
Ikhekhe le-WASC yekhekhelethi (umxube wekhekhe yetshokholethi)
I-travis scott jordan 1 iyathengiswa
ukucoca okwenzekayo ebomini bokwenyani
uyenza njani ikeyiki yomnyama
amandla aphezulu aphezulu aphezulu abenomtya ngasemva
#PeakTV: Yenza njani iFX ukwenza iTV ngokungcono kunaye nawuphi na umntu
Ngexesha le #peaktv, iFX ime ngaphandle.
IVin Diesel: Abagcini boMlawuli weGlass uJames Gunn Ufuna iRocket kunye neGroot Spinoff
Ngaba abalinganiswa ababini abadumileyo abavela kwiMarvels Guardians yeGalaxy franchise banokufumana imuvi yabo?
UKevin Feige Uxoxa ngekamva leBlack Panther 2 Ngaphandle kweChadwick Boseman
Ifilimu elandelayo kwi-Black Panther franchise izakuphonononga ezinye iindawo kunye nabalinganiswa baseWakanda, ngokwe-Marvel Studios boss uKevin Feige.